Puntland oo war cusub ka soo saartay dagaal beeleed ka dhacay Gobolka Sool | HalQaran.com
Home Warar Cusub Puntland oo war cusub ka soo saartay dagaal beeleed ka dhacay Gobolka...
Puntland oo war cusub ka soo saartay dagaal beeleed ka dhacay Gobolka Sool
Garoowe (Halqaran.com) – Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland, Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa ka hadlay dagaal beeleed khasaaro geystay oo saacadihii la soo dhaafay ka dhacay deegaan ka tirsan Gobolka Sool.
Dagaal Beeleedka oo ay ku geeriyoodeen laba ruux tiro kalena ay ku dhaawacmeen ayaa waxaa uu ka dhacay Lafweyne oo ka tirsan Degmada Xuddun ee Gobolka Sool, waxaana uu u dhaxeeyay dad Xoolo dhaqato ah.
Madaxweyne ku-xigeenka Maamulka Puntland, Axmed Cilmi Cismaan Karaasn, ayaa ugu baaqay labada maleeshiyo beeleed in si shuruud la’aan ah oo deg deg ah ay dagaalka u joojiyaan.
Sidoo kale, madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Karaash ayaa soo hadal qaaday xal laga gaaray Colaad ku soo laab laabatay deegaanka Horufadhi ee Gobolka Sool, isaga oo soo dhaweyay.
Ugu dambeyny, deegaanno ka tirsan gobolka Sool ayaa dhowr jeer waxaa ku soo laab laabtay Colaad Beeleedyada, waxaana qaarkood Ciidamo kala dhex dhigay Somaliland halka qaarkood la xaliyay.
Dagaalka gobolka Sool